Adkeeynta Isticmaalka Taageerada Dhaqaale ee Xisbiyada - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Adkeeynta Isticmaalka Taageerada Dhaqaale ee Xisbiyada
La daabacay måndag 7 maj 2012 kl 09.05
Låtskrivare och bidrag. Grafik: Jens Finnäs / Sveriges Radio
In lagu khasbo xisbiyadu iney caddeeyaan howlaha ey u isticmaalaan miisaaniyadda dhaqaale ee lagu taageero kolka laga hadlayo howlaha degmooyinka, sida uu soo ban-dhigay baaritaan. Xisbiyo badan ayaa iminka u isticmaala dhaqaalahaa howlahooda qaran ee xisbigooda, halka uu ku tala-galku ahaa howlaha la xiriira degmooyinka, gobollada iyo wixii la mid ah, sida ku cad war aannu ka soo xiganay laanta wararka ee Ekot.
Guddi-hoosaadka dastuurka ee baarlamanka oo middaa baaritaan ku sameeyay middaa ayaa lagu cadeeyay in xisbiga Sooshiyaaldimoqoraadigu (S) yahay xisbiga keliya ee dhaqaalahaa u isticmaalin howlaha xisbiga ee qaran. Halka xisbiyada Dhexe (C) iyo Doogguna dhaqaale aan sidaa u badnayn u isticmaalaan, marka loo barbar-dhigo xisbiyada kale.
Baaritaankan ayaa la soo ban-dhigi doonaa maanta oo isniin ah, kaasina oo uu hor-kacayo Stig Nyman, kana mid ah siyaasiyiinta xisbiga Kristendimoqoraadiga ee gobolka Istockholm. Nyman ayaa aaminsan in natiijada baaritaankiisani horseedi doono in xisbiyadu dib isugu noqdaan iyo dib u fekerid.